Zvikoro & Dzidzo - Nyore Multi Ratidza - Dhijitari Signage Nyoro
Daycare, Zvikoro, University & Trade Zvikoro
RATIDZA ISANGO RAKO
Enderera mberi kudzidzisa uye kuzivisa vashandi vefakisheni uye vadzidzi ...
Kunyangwe iwe uchimhanyisa nzvimbo diki yekutarisira kana nzvimbo yakakura yekudzidzisa, Easy Multi Display inochengeta vashandi vako nevadzidzi kusvika ikozvino. Vazivise nezvezviitiko zvinotevera, bvunzo, mazororo, uye kunyangwe mitemo yechikoro, mirairo uye maitiro.
Bata nesu nhasi kuti tikurukure zvaunoda uye tanga kugamuchira mabhenefiti ekushandisa yakachipa uye yakapusa midhiya inoratidza software pamusika.
NEI USHANDISIRA KUSHANDISA MULTI RAKANAKA KURATIDZA ZVIKORO?
CHENGETA VASHANDI & VADZIDZI VANOGONESESWA
Vadzidzi, vabereki nevashandi vese vanobatsirwa nekuve nemazuva anouya emviwo, zororo uye kuitirwa pakuratidzira.
RATIDZA ZVINOGONESESA & ZVEMAZWI
Yeuchidza vashandi vako nevadzidzi nezvemitemo yechikoro uye kodhi yemafambiro. Iyo nzira huru yekuratidzira maitiro matsva kana workflows.
ZIVA UYE URATIDZE
Korokotedza avo vakagamuchira mibairo nekuratidzira mibayiro yavo uye nekuzviratidzira nekubudirira kwavo kuvashandi, vadzidzi uye vabereki.
Ku Unicef, tinoshandisa Easy Multi Display mukamuri redu rekutandarira kuratidza zviito zvedu kubatsira vana pasirese. Ichi chi
mukana wedu kuratidza kuzvipira kwedu munzira ine simba - kushandisa manzwiro.